Politika · Oktobra, 2010 · Global Voices teny Malagasy
Politika · Oktobra, 2010
Tantara mikasika ny Politika tamin'ny Oktobra, 2010
Azia Atsinanana 31 Oktobra 2010
Naseho am-pahibemaso voalohany tamin'ny herinandro lasa teo ny sainam-pirenena vaovaon'i Myanmar. Manana anarana vaovao koa izy: fantatra ankehitriny amin'ny anarana hoe Repoblikan'ny Fiombonan'i Myanmar. Mitsikera ny sarin'ilay saina ireo mpampiasa aterineto any Myanmar. Ny mpitoraka blaogy sasany aza manitrikitrika fa ny tafika ihany no asehon'io saina io fa tsy ny vahoakan'i Myanmar
Amerika Latina 28 Oktobra 2010
Eoropa Afovoany & Atsinanana 23 Oktobra 2010
Madagasikara: tatitra momba ny fifandonan'ny mpanao fihetsiketsehana sy ny mpitandro ny filaminana farany
Afrika Mainty 19 Oktobra 2010
Ny mpamaham-bolongana Jentilisa no nanome antsipiriany ny hitany maso [mg] tamin'ny herisetra [fr] nifanaovan'ny mpitandro ny filaminana sy ny mpanao fihetsiketsehana tamin'ny 18 Oktobra teto Antananarivo, Madagasikara. Mpikambana avy amin'ny mpanohitra heverina ho 1500 eo ho eo no nanao fihetsiketsehana nanoloana ny fitsarana izay niantsoana ny mpitarika. Ity moa misy ny...
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 17 Oktobra 2010